မြန်နှုန်းမြင့်စာနယ်ဇင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်မြန်နှုန်းမြင့်စာနယ်ဇင်းစက်ရုံ
DAYA ဖြောင့်ဘက်နှစ်ချက် crank punch press VS အခြားဖြောင့်ဘက်နှစ်ချက် crank press များ Daya press Daya press: ပလက်ဖောင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးခြံစည်းရိုးနှင့်အတူ၊ clutch ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အအေးဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အဆင်ပြေစေခြင်း၊ ။ ပိုလုံခြုံပြီးပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ အခြားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုအခြားစာနယ်ဇင်းများ - ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပလက်ဖောင်းမရှိပဲ။ clutch ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, အအေးဆီအစားထိုး, အဓိကမော်တာခါးပတ်၏လျော့ရဲညှိနှိုင်းမှုစသည်တို့ကို ...
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် DAYA ဖြောင့်ဘက်နှစ်ချက် crank punch press VS အခြားဖြောင့်ဘက်နှစ်ချက် crank press များ Daya press Daya press: ပလက်ဖောင်းနှင့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး၊ clutch ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အအေးဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အဆင်ပြေစေခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ ပိုလုံခြုံပြီးပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ အခြားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုအခြားစာနယ်ဇင်းများ - ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပလက်ဖောင်းမရှိပဲ။ clutch ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, အအေးဆီအစားထိုး, အဓိက moto ၏လျော့နည်းညှိနှိုင်းမှု ...
Performance ဝိသေသလက္ခဏာများ ၁။ ဘောင်သည်စွမ်းအားမြင့်သံဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသံမဏိကိုယ်ထည်နှင့်ပြုလုပ်ထားသော gantry ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ၎င်းသည်ဝန်အောက်ရှိကိုယ်ထည်၏အဖွင့်ပြproblemနာကိုကာကွယ်ပေးပြီးမြင့်မားသောတိကျသောထုတ်ကုန်များပြုပြင်ခြင်းကိုသဘောပေါက်သည်။ ၂။ ၀ င်ရိုးအလယ်ဗဟိုလမ်းညွန်း၊ လမ်းညွှန်တိုင်လေးခုသည်အရှည်တစ်ခုလုံးကိုလမ်းညွှန်ပေးသောကြောင့် ၀ တ်မှုန်ဝန်သည်ပင်ကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်ခြင်းတိကျမှန်ကန်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီးဘ ၀ ၏သက်တမ်းကိုရှည်စေသည်။ ၃။ ဆီအအေးအားအတင်းအဓမ္မချောဆီနှင့်ရေနံပေးဝေရေးစနစ်အား ...
သတ်မှတ်ချက်ကောင်းကျိုးများဆလိုက်လမ်းညွှန်အားသာချက် ၁ - ဆလိုက်ရထားလမ်းသည်“ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သတ်ခြင်း” နှင့်“ ရထားလမ်းကြိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်” ကိုအသုံးပြုသည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သတ်ခြင်း - အပူချိန်သည် hrc48 အထက်တွင်ရောက်ရှိသည်၊ ရထားလမ်းကြိတ်ခြင်းဖြစ်စဉ် - မျက်နှာပြင်သည် Ra0.4 သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်၊ ယေဘုယျအားဖြင့် 03mm / m2 ဖြစ်သော 0.01mm / m2 အမြင့်။ အားသာချက်များ - သေးငယ်သောအ ၀ တ်အစား၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ တိကျမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်သေခံသူ၏သက်တမ်းတိုးတက်စေရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာ။ Worm ဂီယာအားသာချက် 2: Tur ...
Motor Stator နှင့် Rotor (HHD စီးရီး) အတွက်ဖြောင့်သောဘေးထွက်မြန်နှုန်းမြင့်စာနယ်ဇင်း
မြန်နှုန်းမြင့်စာနယ်ဇင်းကို C ဘောင်ခ
Performance ဝိသေသလက္ခဏာများ 1. ဘောင်သည်စွမ်းအားမြင့်သံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အတွင်းပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာပြီးနောက်၊ ပစ္စည်းသည်တည်ငြိမ်ပြီးတိကျမှုမရှိဘဲကျန်ရှိနေသည်၊ ၎င်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၂။ နှစ်ထပ်လမ်းညွှန်ရထားလမ်း၊ ဗဟိုမှတ်တိုင်တစ်ခု၊ ရိုးရှင်းသောလျှောပြားဖွဲ့စည်းပုံကိုအစားထိုးရန်သုညအမှား ball bearing သုံးပြီးနိမ့်ဆုံးပြောင်းလဲနေသောပွတ်တိုက်အားကိုလျှော့ချရန်နှင့်အပူပုံပျက်သောအနိမ့်ဆုံးနှင့်အောင်မြင်ရန်အတင်းအကျပ်ချောဆီနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ...